HONDA FIT GD1 အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Khant Wun Yan
လူတကာ ချစ်တဲ့ HONDA FIT
ENG 1300 CC
မှန်မဲ မီးချောက် - မှန် ချိုး မှန်ခေါက် - မှန်မဲ မီးချောက်
TV . DVD . BACKCAMERA . ဘီးဖုံး အလှဆင်ထား
ကားကောင်း အင်ဂျင် ကောင်း အတိုက်အခိုက်ရှင်း
အိမ်စီးတလက်ကိုင် .........ဟိုင်းဝေ ခရီးတန်ထွက်နိုင်
သက်တမ်းအသစ် တိုးထားပီး ၂၀၂၀
ဈေး ၁၁၉ သိန်း ၅ သောင်း
မန်း ကား ကြည့်ရ မည်
ဖုံး 09 790 159 790
09 976 300 300
အမည်: HONDA FIT GD1